musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Yedu Rudo Nyaya pamwe neakanaka Seychelles Islands
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Seychelles Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Aimbove nyanzvi yezvekushanya, Roger Porter-Butler, nemukadzi wake, Joan, vanoshanyirazve ndangariro dzavanofarira dzeSeychelles, kona yavo diki yeparadhiso kubvira 2011.
Muna 1978 apo kushanya kwakange kuri kutsva kunzvimbo yekuIndia Ocean, Roger akangoyevedzwa ipapo nezvitsuwa zvakanaka zveSeychelles.
Akazvivimbisa kuti achadzoka kuzofamba gungwa rakasiiwa reAnse Lazio paPraslin.
Izvo zvaisazove kusvika 2011 kuti aizodzoka nemukadzi wake makore gumi mushure mekuroora kwavo.
Vakagara mukamuri ravo rekutandarira rinotonhorera muSomerset kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweEngland, Roger naJoan Porter-Butler, vaviri veBritish vakasiya basa, vakasangana nechikwata cheSeychelles neChitatu masikati.
Musangano, wakaitwa kuburikidza nepamhepo chikuva zoom, nerubatsiro rwe COVID-19 uye marambidzo ayo ekufamba, yaive imwe yeaya akamboitika-mu-e-hupenyu kusangana, kutakura vanyori kuburikidza nerakanakisa nyaya yerudo yePorter-Butlers neSeychelles.
Roger akarondedzera yake yekutanga ndangariro dzeSeychelles kumashure muna 1978 apo kushanya kwaive kutsva kuIndian Ocean kwaienda - nhandare ichangovhurwa muna 1972. Roger akarangarira nemanzwiro akawanda kuti akafadzwa nehumhandara hwezvitsuwa zvakanaka uye achinyanyo kufadzwa naAnse Lazio nehupfu hwayo hunyoro jecha rakagadzirwa nekuisa matombo egranite.
“Kushanya kwangu kwekutanga muSeychelles kwakatora kwemavhiki maviri uye ndainakidzwa nekuve munzvimbo yakanaka kudaro, kunyanya kuve nemhenderekedzo yeAnse Lazio kuPraslin kwezuva rose. Ndipo pandakazvivimbisa kuti ndaizodzokera famba pamhenderekedzo iyi isina vanhu zvakare, ”akadaro Roger.
"Ndiri mubhizimusi rekushanya nekufamba nyika, ndakachengeta ndangariro dzeSychelles dzichidikanwa pamoyo wangu uye ndaiziva kuti ndaizodzoka."
Makore akafamba asi Roger haana kumbokanganwa nezve Seychelles, uye muna 2011, makore gumi mushure mekuroora mukadzi wake akanaka, Joan, akamutora parwendo kuenda kune yaizove imwe yenzvimbo dzavanofarira.
Vaviri ava vakasarudza kutsvaga chimwe chishamiso cheSeychelles, vachigadzirisa nguva ino kuchitsuwa cheSte Anne uye panguva yerwendo, vakapemberera makore gumi emakore muhukama hwavo pahotera yeSe Seasons kuMahé.
Vachifunga, Roger naJoan vakataura zvine rudo nezvekushanya kwavo kuMoyenne Island, chitsuwa chemahekita makumi maviri nemasere chinoumba chikamu cheSainte Anne National Park, kwavakasangana naBrendon Grimshaw, aimbova mupepeti wepepanhau reBritish, aive nechitsuwa ichi panguva iyoyo.
Mr. Grimshaw vakasaina bhuku ravo "A Grain of Sand" ine chinyorwa chakakosha kune vaviri vacho ichivakoka zvakare munguva yekushanya kwavo mune ramangwana.